Ogaden News Agency (ONA) – Minti Press News – Afduubka ay ka cabanayaan Qaxootiga ku jira xeryaha Kenya
Minti Press News – Afduubka ay ka cabanayaan Qaxootiga ku jira xeryaha Kenya
Wargays ku baxa shabakadaha oo fadhiisu yahay dalka Mareykanka gobolka Minnesota oo lagu magacaabo Mint Press News ayaa maqaal uu ka qoray Qaxootiga ku jira xeryaha Kenya sheegay inay ka cabsanayaan inla afduubo. Wargayska oo arima badan oo quseeya Ogadenya iyo halganka ka socda ku dheeraaday afduubkii ugu dambeeyay ee loo gaystay madaxda u joogtayKenya arimaha wadahadalka. Wuxuu kaloo soo qaatay wargayska codsigii Haya’adda Qaxootiga Ogadenya u gudbisay dawladda Kenya ay kaga codsanayeen in dalkooda lagu badbaadiyo, arintaasoo uu wargayska ku tilmaamay inay la kulmaan mashaakilaad badan iyo afduuba.
Wuxuu wargayska soo qaatay bayaanadii uu ururka ka soo saaray arintii afduubka. Wuxuu sheegay wargaysku in siday sheegaty ONLF lagu arkay labada masuul ee la afduubay isbitaal ku yaala Adisababa iyagoo laga daawaynayo dhaawac loo gaystay.
Wuxuu soo qaatay wareysaiyadii uu Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Dibadda siiyay idaacadaha iyo saxafiyiinta caalamka, isagoo u sheegay habkii loo qabtay labada masuul oo loo adeegsaday askarta booliskaKenyaoo si khiyaana ah uga kaxeeyay goobtii lagu qabtay.
Wuxuu sheegay mudane Madey in markii ay diideen labada masuul inay raacaan gaadhigii ay wateen booliska iskana caabiyeen uu khiyaano sameeyay sargaalkii afduubka ka dambeeyay, isagoo dadkii ku soo xoomay goobta u sheegay inay yihiin laba nin oo argagixsa ah oo raba inay qaraxyo gaystaan, kana dalbaday in lala qabto. Ka dib shacabkii ayaa ka xoog badiyay oo ku riday gaadhigii ay wateen labada nin ee booliska ah ee lacagta qaatay. Wuxuu sheegay mudane Madey in dawladda Kenya ay soo qabateen nimankii Kenyanka ahaa ee ka dambeeyay afduubka maxkamadna lasoo taagay.
Wuxuu wargayska soo qaatay in ninkii u hadlayay dawladda Itobiya ee VOA-da qaybta Somaliga ay wareysatay oo yidhi waxaan ahay La-taliyaha M/weyanaha maamulka Somalida uu sheegay inay labadaa masuul iskood ugu yimaadeen meel ka mid ah Itobiyana lagu hayo oo mardhow ay la hadli doonaan saxaafadda.
Wuxuu maqaalka oo aad u dheer ka warbixiyay dagaalada joogtada ah ee ka socda gudaha Ogadenya isagoo raaciyay inay jabhadda kordhisay weerardii ay ku hayeen ciidamada Itobiya oo dhibaata badan ku haya dadka shacabka ah.
Maqaalka Wargayska Minti Press News;